Ndi Ndi Ngwunye Knights di? - 1aviagem.com
Gara aga post: Kedu ihe ị ga-eleta na Riga? Obodo nke jikọtara ụlọ ọhụụ na nke ochie - Latvia
Nkwupụta ozo ozo: South Africa Ajụjụ ọnụ a South Africa. E nwekwara mgbanwe a na-atụghị anya ya n’etiti ajụjụ ọnụ ahụ
Edebere 5 December 2019 site Römulo Lucena
N’ịgakwa n’izi ọkwa gara aga, a ka nwere ihe ụfọdụ dị mkpa ikwu gbasara Riga. Dị ka eziokwu ahụ bụ na obodo ahụ nwere anyanwụ naanị maka ya. Ma na-ekpo ọkụ anaghị ekpo oke ọkụ. Aga m ekwu mmetụta dị mma n'etiti ogo 18 na 26 n'ọnwa Eprel. Yiri gburugburu adabaghị na ọdịda anyanwụ.
Ezigbo ụlọ ọdịda anyanwụ
Mma, ahapụrụ m ụfọdụ àkwá dị mfe na post nke gara aga. Ma isiokwu taa:
Ndi Nwunye Knights di n'ezie?
Ka ọ̀ bụ akụkọ ọdịbendị na-emeghị eme dị ka akụkụ nke akụkọ ọdịnala a ma ama? Ka ọ bụ na ha mepụtara ihe nkiri Hollywood?
Ezie na DC enweela isi ojii nke ya…
Nke a bụ ihe anyị na-ewetara gị ugbu a na ọkwa a.
Know maara nke ọma?! Dịka aga na post gara aga, ebe anyị ga-ebido dị n'etiti etiti obodo ochie. (pịa ebe a ka ị gụọ gbasara).
Ma ka m na-eche ụgbọ ala ndị njem na-ahapụ ebe ahụ, elere m anya n'ihu ihu ụlọ ndị isi ojii.
Achọpụtara m na ihe oyiyi a kacha mara oke mma yiri nke ncheta nnwere onwe. Ha abụghị otu, kama ha yiri.
Na facade ị nwere ike ịhụrịrị na enwere mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke afọ nke 1334. ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịsị nke kacha nta. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị m, mana n'oge ochie, ndị mmadụ yiri ka hà nwere mmasị n'ezie na ịme mgbidi. N'ụbọchị ndị a, ọ bụ otu ka ọ bụla, akụkụ niile nke nwere enyo. Ezi ihe Art Nouvau wetara echiche a nke igwa akuko nke ebe ahu. Ihe ndị a kpụrụ n’elu ụlọ ndị ahụ na-ebukwa akara nke ebe ahụ. Rịbaakwa uwe nke ogwe aka nke nnukwu akpụrụ akpụ, ọ ga-abụrịrị “igodo” akụkọ anyị.
Ọ banye n'ụgbọala ahụ, ọ malitere ikwu maka ihe a kpụrụ akpụ. aha ya bu Roland ma onweghi ihe ozo karia onye isi templar knight onye gbachitere alaeze Riga.
N'ezie apụrụ m ọtọ mgbe m nụrụ nke ahụ na bọs ụgbọ ala!
Ọbụghị nke ahụ, ụfọdụ n'ime ụgbọ ya kwuru na etinyere na Osimiri Daugava na ọtụtụ akụ na ụba ha na oke nke eze France onye ji Roland nnukwu ego.
Ebe ụgbọ mmiri Roland zoro
Ihe ịtụnanya ahụ anaghị akwụsị ebe ahụ. Na mgbakwunye na Roland ndị ọzọ Templar knights na-echebe Riga. Ee, ihe oyiyi ndị ọzọ na-eduga anyị ikwere na narị afọ nke iri na atọ na ọ bụ ndị ọzọ Knights Templar gbakọtara ebe a. Gịnị ka mmadụ niile nwekọrọ? Ha bụ mma ma ọ bụ ihe ịtụnanya, nke na-abụkarịkwa otu, nke nwere nkwa dị nsọ ndị zukọtara n'ụlọ blackheads (ikekwe maka "oriri na nnọkọ oriri") site n'oge ruo n'oge.
Roland onye guzobere Riga.
N’echi ya emekwara m ụzọ ọzọ ebe ha na-ekwu maka Roland ọzọ. Nke a ka ewere ya ka dike na onye na akwado obodo. Ọzọkwa, ọ bụ onye edemede sitere n'usoro nke Emperor Charlemagne (narị afọ nke itoolu) (onye bụ onye France) ma gbasawanye alaeze nke ukwuu nke na a na-akpọ ya alaeze alaeze Caroling. Ya mere Roland bụ onye kpatara Riga. O nwekwara otutu ugwu. Site n'oge ahụ akara ebe e wusiri ike na mkpọchi ụzọ abụọ na-egosipụta obodo Riga. N'ihi na agafe agafe dị ezigbo mkpa maka azụmahịa mpaghara.
Nke a bụ akara nke obodo a na narị afọ nke iri na atọ.
Stampụ Riga. 13 narị afọ
Ihe akara a na-agbanwe agbanwe wee nweta ihe ọ pụtara. Ọ malitere site na mkpịsị ugodi, mgbe ahụ mgbidi siri ike na ndabere ruo mgbe ọ bịarutere na njedebe (11), nke bụ otu ihe ahụ na ọta nke ihe oyiyi Roland.
Ya mere, ndị ọzọ Knights Templar onye gbachitere obodo nwekwara ikike iji akara a.
Ma ole ndị bụ Knights Templar?
Ka m jiri ozi a buru n'uche na otu ụbọchị n'ime obodo m kpebiri ime nyocha miri emi. Ọ dịghịkwa ebe dị mma iji nyochaa ezigbo akụkọ karịa n’ọ́bá akwụkwọ. Ekpebiri m ịga ebe ahụ.
Chee echiche banyere nnukwu ebe! Ọ bụ ọbá akwụkwọ kachasị ukwuu m tinyela na ndụ m. O bu ihe nwute na enwebeghi m oge n’ebe ahu, nihi na emechiela 18: 00h (Ha kariri ala 4 ala ma maka ndi na-eme njem mbu n’ebe ahu, oge di anya na njem ha gha abia, ma obu site na ime ha nke ime ihe nka. Ee, chọpụtakwa ihe n'asụsụ Bekee m nwere ike ịghọta kama ịsụ Latvian, nke bụ asụsụ obodo.
Mana enwere ike ikwenye ụfọdụ akụkọ a.
The Knights Templar dị adị! Ma ọ bụ dị ka a ga-ahọrọ ka a kpọọ ha: “Usoro nke Ogbenye Knights nke Kraịst na oflọ nke Solomon.
Aha a dum sitere na nkwa nke ịdị nsọ, ịda ogbenye, nnabata, na nrube isi ha nwere. Ha kwuru na ha enweghị ike ire ure, yabụ ọ bụrụ na ha chere na e kwesịrị igbu mmadụ, nke a bụ uche nke Kraịst. na akụkụ nke "Templelọ nke Solomon." Ọ dị ruo ebe e guzobere iwu ahụ. N’ugwu ahụ ụlọ nsọ Sọlọmọn dị. Site n'ụzọ, Sọlọmọn abughi eze nke Akwụkwọ Nsọ, kama ekwuru na ọ kacha mara ihe ma baa ọgaranya karịa ndị eze niile gụnyere Eze Devid. Ya mere, idi “odi nkpa nke Kraist na ulo nke Solomon” na-eweta amamihe na oganihu.
N’oge a na-agha agha, ha bụ ndị amị -agha n’agha. Ha ghọrọ onye a ma ama na onye a ma ama. Na mbu ha biri na onyinye site n’aka ma ndi obodo ma ndi eze jiri ndi na eburu ha gaa Jerusalem.
N’ezie, n’ọtụtụ oge ka ejirikwara akara iji mee ka a mata na ọbụnadị nke obodo ahụ ma ọ bụ obodo ahụ ndị mmadụ na ngwongwo njem ha nke ga-aga Jerusalem rutere.
Karịsịa ha goro ọrụ ndị eze Europe na ndị eze Mongol ọrụ. Enwere ọtụtụ ndị ohi na ndị na-apụnara mmadụ ụzọ, ọtụtụ ndị eze ejiri akụ ha na ụgbọ ala. Onye na-eche nche enweghị ya otu ihe ọmụma banyere mbara ala ahụ dị ka ndị ahụ mara mma. Yabụ, ụfọdụ njiri mara nke atụmatụ na ọgụ kpebiri ịme onwe ha ma guzobe ụkpụrụ dị ebube nke ndị Templars.
Ntughari ha bu, “O bughi anyi, Onyenwe anyi, kama o buliri aha gi otuto. Ọ bụkwa site na otu ya na-abịa obe ama ama Maltese na mpaghara ọcha. Nke dị na Brazil nke mbụ pụtara na Vasco da Gama Caravel. M ga-ekwu ebe a na ọ nwere ike ịbụ templar Knight! Ma ọ bụ Iwu Ọhụrụ Portuguese nke bilitere na Ọnọdụ. Ebe ọ bụ na amachibido iji aha gara aga.
Lee naanị nkọwa: Red Cross (Maltese), Oge ndị agha, nkà ịkwọ ụgbọ mmiri, na-ebugharị ndị mmadụ… ntụkwasị obi eze… bụcha ezigbo ihe ịrịba ama. na ee, ọ ga - abụrịrị Onye Ọnwụnwa.
Onweghi afọ ojuju M kpebiri ịga ụfọdụ ebe ngosi ihe mgbe ochie. Nke mbụ n’ime ndị a bụ Katidral St Peter. N’ezie, echere m na m ga-eleta katidral, mana mgbe m ruru ebe ahụ, achọpụtara m na ụlọ ahụ ghọrọ ebe ngosi nka. Ihe nke mbu agwara m bu na ndi nile di n’iru obodo ha, tinyere ulo nke ndi isi ojii ka a weghachiri. Ihe nile ị hurula ka ebibiela n’oge agha ụwa nke mbụ na nke abụọ. Mana enyere mkpa obodo na onyinye aka, eweghachila ihe ọ bụla, ewezuga St Peter na Katidral St Peter. Ihe ndị a ga-abụ nanị ụlọ ọrụ guzobere ziri ezi kemgbe narị afọ nke iri na atọ. N'ebe ahụ katidral ị ga-ahụkwa ihe oyiyi mbụ gbawara site na bọmbụ ndị gbawara.
Ọ dị mma, na akụkọ a Templar, chee na ha na-agbazinye ndị eze ego! Ma cheta na Roland nwere usoro ọmụmụ French.
E wuru ebe ewusiri ike nke Riga na nnukwu ego, nke akụkụ ya na-esite na templars ndị gbakọtara ebe ahụ. Ndị ọkọ akụkọ ihe mgbe ochie na-ekwu na eze France, Philip nke anọ a maara dị ka “mara mma,” ji ndị Templars ego, ọ bụghị naanị ya, kama ọ bụ Pope Clement. Thegwọ ahụ hiri nne nke na ọ na-eyi iguzosi ike n'ezi ihe nke alaeze France. Poopu adịghịkwa eji akụkọ a nke ndị mmadụ ji mma dị nsọ dochie ndị nsọ na chọọchị. E mesịa na Fraịdee, Ọktoba 13, 1307 eze nyere iwu ka etinye mkpọrọ niile na alaeze ya. N'ihi ya, ha na-ekwu na chi ọjọọ nke Friday 13. Chọọchị Katọlik, nke tụfuru ọpụrụiche na ikike ọchịchị na ndụ nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ mechara kwado eze France, yabụ '' ụka nsọ '' site na iwu Papal nyere iwu ka a gbazee ma kpochapụ ya. Mgbe ahụ n'aha Pope Clement na Eze Philip nke France bidoro mkpagbu nke ndị Templars. Ọ bụghị naanị anụ ahụ, kamakwa ịkọcha ihe.
Nnukwu ihe omuma atu bu akara n’acha isi. Oflọ ndị isi ojii.
Ihe nnọchianya nke templar ochie
N'ihi ebubo nke Papal na ebe ahụ, na Blackheads, enwere ogige nke mbibi nke kwusara nwoke idina nwoke, omume ndị naanị ndị jụrụ okwukwe. Dịkwa ka ihe akaebe, ọ zọdara akara ya na onye ọ bụla chọrọ ịhụ. The Templars gbanwere akara. Tupu, enwere ọdụ abụọ ejiri n’elu ịnyịnya, dịka ihe ngosipụta na okpokoro Templar kwesịrị abụọ, otu a bụ ike ya n’agha. (Knowmara Batman na Robin? Ee, dịka nke ahụ) Mana mgbe ebubo nke Pope ha wepụrụ mma, yiri nke taa.
Mgbe ha lere anya na ha enweghị ike imeri ndị agha na-achọ ibuso Riga agha, ha dere ihe na-esonụ banyere ụgbọ ahụ:
"Ọ bụrụ na m nwụọ, bia wulite m ọzọ." Nke pụtara: Ọ bụrụ na m ga-ala n'iyi, bịakwa wulite m ọzọ.
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịmara na emeela ndebanye aha ahụ n'ezie. Emepere ụlọ ahụ na 1.333 na nke izizi. Ọ lara n'iyi Agha IIwa nke Abụọ, mana e wughachiri ya na 1999. Maka nke a enwere ụbọchị mmeghe abụọ na blackheads house.
Ọ na-agafere, o doro anya na ndị ụka Katọlik kpagburu, onye ndozigharị mara ndị Protestant. Martin Luther.
Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na akụkọ ahụ metụtara okwukwe na ọ metụtara mgba na ụka, mgbe ahụ ọ gafere Riga.
Ma kedu ka ụlọ a nke isi ojii dị?
Ọ dị mma, ọ bụ nnukwu ihe omimi, mgbe m nọ ebe ahụ emechiri ya maka emume. N’ihi ya, a gwara m ka m laa. Ma enwere m ike ivu banye n’ime nnukwu ọnụ ụlọ etiti tutu ndị nche akpọpụta m. (Can gaghị enwe ike ịchọ akụkọ ihe mere eme na ebe udo dị).
Nke a bụ naanị n'ọnụ ụlọ ogologo chere ndị ọzọ! Agaghị m enyere gị aka ma m cheta Wayne Mansion na ọwara nzuzo ya na amaokwu nzuzo ya. Ndị ndu njegharị ahụ kwuru na n'oge a na-ewughachi ahụ, a hụrụ ọtụtụ iwu nke kwere ka ijikọ ụlọ Blackheads na ụlọ ndị gbara ya gburugburu, ụka na ọdụ ụgbọ mmiri. Achọpụtara ha naanị n'ihi na n'ime nwughari ahụ, e nwere olulu iji dochie ntọala nke ụlọ ahụ, nke e bibiri na 1941 site na bọmbụ n'oge Agha IIwa nke Abụọ.
Ma kedu ka akụkọ Roland si kwụsị?
O di nwute na o bu otu onye nke na apughi ulo ya n'ihi Pope ma obu Eze.Ma dika onye isi Riga, ohoro ka o noro n’ebe ahu ma emesia jide ya, bo ya ebubo, ma mesịa gbue ya oku n’onye ikpe.
N'okwu ikpeazụ ya na mma Roland kwuru:
“Filip, Clement! Emeghị m ọ bụla iwu ọ bụla nke ịbụ onye aghụghọ. Ekperem ekpere na n’ime otu afọ ka unu ga-edozi ego ole m ga-aza n'ihu Chineke! Ha mere m ihe ọjọọ. ”
N'ụzọ na-akpali mmasị, ha na-ekwu na Eze ndị France nwụrụ ka ọnwa gasịrị! Ka ọnwa isii gachara, Pope nwụrụ! Ihe a niile, n'ime oge afọ 1.
Ọ bụ ndị na - agụ akwụkwọ m hụrụ n'anya, ọrịa Roland jidere.
Enwere ike ịgụ akụkọ a na Katidral St Peter na Riga.
You ga - ekwu nke ahụ abụghị ọnọdụ ahụ zuru oke? Abụ nwanyị nwere ihe ndị a.
Tupu m gụchaa ọ ga-amasị m ịhapụ enyi m Zé ekele, n'ihi na ọ bụ ya bụ onye mbụ gwara m okwu banyere ịdị adị nke ndị na-anọghị na mbara ụwa. Ma ọ bụ site na DC Comics.
Nke a bụ nsonaazụ njem mbụ anyị na Riga, maka ndụmọdụ na ihe ị ga-eleta. banye na post gara aga ebe a.
Enwere m olile anya na ị nụrụ ụtọ ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbaso anyị na bọtịnụ na-acha ọbara ọbara ma soro ndị enyi gị kọwaa akụkọ a nke nka na-e lifeomi ndụ.
akụkọ ihe mere eme Batman Ngwunye akụkọ ihe mere eme Riga Roland iri na atọ na narị afọ Ọnwụ